Rooble oo eryey 7 xubnood oo ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada - Caasimada Online
Home Warar Rooble oo eryey 7 xubnood oo ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka...
Rooble oo eryey 7 xubnood oo ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa eryey 7 ka mid ah xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka, wuxuuna magacaabay toddoba xubnood oo cusub.
Hoos ka aqriso qoraalka kasoo baxay Rooble
XIL KA QAADIS IYO MAGACAABIS XUBNO KA TIRSAN GUDDIGA KHILAAFAADKA
■ Markii uu arkay; Qodobada 99-aad iyo 100-aad ee Dastuurka Ku Meel Gaarka ah, Markii uu tixgaliyay Go’aannadii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda loogu xilsaaray hiogaaminta iyo habsami u socod-siinta doorashooyinka daika.
■ Markii uu xaqiiqsaday; in xubno ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka ay lumiyeen madaxbanaanidii guddinimo iyagoo ku milmay siyaasadda, isla-markaana baal maray xeer anshaxa doorashada.
■ Markii ay u caddaatay; in Guddiga Xallinta Khilaafaadka ay khatar ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinku ku qabeen in ay si caddaalad uga garsooraaan cabashooyinka Ia xiriira doorashooyinka.
■ Markii uu xaqiiqsaday; in xubnaha magacyadooda hoos ku qoran yihiin ay masuuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay, kana dhaga adaygeen talooyin iyo digniino Ia xiriiray ka waantoobista falalka ay ku jiraan ee baal-marsan nidaamka xil gudashadooda.
■ Markii uu tixgaliyay: Halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahaan Doorashada iyo xasiloonida guud ahaan ee DalkaWuxuu go’aamiyay
Waxaa xilalkii iyo xubinimadoodii Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu kala yihiin:
■ Qodobka 2-aad
Waxaa la magaacaabay xubnaha magacyadoodu hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka iyagoo beddelaya xubnaha kore ee xil ka qaadista lagu sameeyay
■ Qodobka 3-aad
Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhawraan anshaxa iyo dahfurnaanta doorashooyinka, ilaaliyaan madax-bannaanidooda kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda.
■ Qodobka 4-aad
Xeerkan waxuu dhaqangelaayaa marka uu saxiixo Raisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha JFS